Huawei P स्मार्ट: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र प्रक्षेपण पुष्टि भयो Androidsis
Huawei एक ब्रान्ड हो कि विश्व बजार मा एक पैर प्राप्त गर्न को लागी प्रबंधित छ। यसको लोकप्रियता हालका वर्षहरुमा गुणस्तरीय फोनका लागि ठूलो बृद्धि भएको छ। सबै दायरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुको अतिरिक्त। रणनीति जुन अझै कार्यान्वयनमा छ। चिनियाँ ब्रान्डले अब यसको प्रस्तुत गर्दछ मध्य दायरा को लागी नयाँ फोन। को Huawei P स्मार्ट यो पहिले नै एक वास्तविकता छ।
ब्रान्डले यस नयाँ फोनको घोषणा गरिसक्यो। यस विवादाधिकार मूल्य, र यस Huawei पी स्मार्ट को रिलीज मिति पहिले नै ज्ञात छ। एउटा मोडेल मध्य दायरा जित्ने भनिन्छ. के यो सफल हुनेछ?
निस्सन्देह फोन stomping आउँछ। किनभने सधैं जस्तो ब्रान्डमा, हामीलाई पैसाको लागि ठूलो मूल्य प्रदान गर्दछ। थप रूपमा, यो Huawei P स्मार्ट चिनियाँ ब्रान्डको मध्य दायराको लागि उल्लेखनीय सुधार हो। केहि चीज जुन प्रयोगकर्ताहरूले प्रतिक्षा गरिरहेका थिए।
यस उपकरणको लागि पूर्ण विशिष्टता अब खुलासा गरिएको छ. हामी यो फोनबाट के आशा गर्न सक्छौं?
अपरेटिङ सिस्टम: EMUI 8.0 को साथ Android .8.० Oreo
स्क्रिन: 5,65 इन्च IPS LCD
पर्दा रिजोल्युसन: पूर्ण HD + (२,१2.160० x १,०1.080० पिक्सेल)
स्क्रीन अनुपात: 18: 9
प्रोसेसर: किरीन 659 XNUMX eight आठ-कोर
भण्डारण: १२32 जीबी (माइक्रोएसडीको साथ विस्तार योग्य)
रियर क्यामेरा: १ + + MP सांसद
अरूलाई: फिंगरप्रिन्ट रिडर, माइक्रोएसडी कार्ड स्लट, डुअल सिम
कनेक्टिविटी: वाइफाइ 802.11०२.११ बी / जी / एन, वाईफाई प्रत्यक्ष, ब्लुटुथ 4.2.२, A-GPS, GLONASS, BDS
आयामहरू: १150,1. x x .72,1१..7,5 x XNUMX..XNUMX मिमी
वजन: १ 143 grams ग्राम
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यो Huawei P स्मार्ट एक धेरै पूरा फोन हो। थप रूपमा, यसले केहि पक्षहरूको अनुपालन गर्दछ जुन प्रयोगकर्ताहरूलाई सबैभन्दा धेरै मनपर्दछ। उपकरण अनन्त स्क्रीनमा बेट गर्दछ, सायद कुनै पनि फ्रेमहरूको साथ। तेसैले फेरि प्रसिद्ध १ 18: ratio अनुपात छ। थप रूपमा, यस पछाडि एक डबल क्यामेरा छ। निस्सन्देह, पक्षहरू जुन यसलाई सकारात्मक मूल्यवान बनाउँछ।
Huawei P स्मार्ट को मूल्य 259 यूरो हुनेछ। अपेक्षित फेब्रुअरी १ ​​देखि बजार मारा, त्यसैले यसको आधिकारिक सुरुवातको लागि मात्र दुई हप्ता बाँकी छ। कुनै श doubt्का बिना, यो मध्य दायरा जित्ने क्षमतासहितको फोन हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Huawei » Huawei P स्मार्ट: यो आशाजनक मध्य-दायराको निश्चित विवरणहरू
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S March मार्च १ बाट आरक्षित गर्न सकिन्छ